Cosoble oo ka tirsan Madasha Xisbiyadda Qaran oo Si lama Filaan ah R/wasaare isugu sharaxay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Cosoble oo ka tirsan Madasha Xisbiyadda Qaran oo Si lama Filaan ah R/wasaare isugu sharaxay
Jul 30, 2020 - 44 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Xildhibaan Cabduqaadir Cosoble Cali oo ka mid xubnaha mucaaradka, islamarkaana ka tirsan Madasha Xisbiyada Qaran ayaa isku soo taagay xilka ra’iisul wasaarenimo, kadib markii la riday xukuumaddii Xasan Cali Khayre.
Cosoble oo sidoo kale ah hoggaamiyaha xisbiga Ilays ayaa haatan bilaabay olole xoogan oo uu ugu jiro, sidii loogu magacaabi lahaa xil-ka ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Sidoo kale wuxuu duubabka dhaqanka Beesha Mudulood u soo bandhigay damaca uga jiro kursigaasi, si ay ula raadiyaan.
Go’aanka Cabdqaadir Cosoble oo mucaarad weyn ku ahaa madaxda dowladda ayaa dad badan lama filaan ku noqday, balse lama sida ay ugu dhalatay arrintan, maadaama saaxibadiisa ay si weyn uga soo horjeedaan dowladda federaalka iyo muddo kororsi.
Xildhibaan Cosoble ayaa horey isugu soo sharraxay xil-ka madaxweynaha Soomaaliya 2017-kii, gaar ahaan doorashadii uu ku soo baxay Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo).
Tan markii Sabtidii xilka laga tuuray Xasan Cali Khayre, Soomaaliya ayaa gashay is-bedal siyaasadeed, iyada oo ay beesha caalamka dhankeeda soo saartay digniino culus.
Si kastaba ha’ahaatee Madaxweyne Farmaajo ayaa wada wada-tashadii ugu dambeeyey ee magacaabista ra’iisul wasaaraha cusub oo hada saadaalino kala duwan laga bixinayo.
Imaam dabshidoow. Ma halkaa ayaad hadana ka raadisay.
Hadda ogoow abuukaate dhegey. aka dalan doole waa losoo bandhigay. Wuxuu dhahay. No hambo murusade iyo 5 bilood.
Tolweyne. Kala shaadheyn ayuu u baahan yahay.
Weli ma iloobin. Hadaladaadii.
Harti kursiga saraa u muuqdo.
Wacbuudhan darood in xamar laga saaro ayuu rabaa. Ileen turubka ma baratiin.
Calool xumaan kuugu hayaa.kkkkkkkkkkk.
Duco wax dhaafsan iskala her imaam.
Waar Abdiqaadir Ali Cosoble si shakhsiyan ayaan u aqaannaa. 1990 ayaan isuga kaaya dambaysay maraan Xamar tagay. Inuu kursigan hammiyana wax diidahayo ma jiro kaddib khiyaanadii qaran ee Farmaajo uu sameeyay. Waayo Somalia oo dhan baa ka socda ciyaar, khiyaano qaran iyo daba maryo iwm
Waxaan guda geli doonaa markaan afurno maanta helidda telephonkiisa insha Allah si aan suaala aan qabo u waydiiyo.
Si kastaba waxaan rumaysanahay inuu ka fiicnaan doono raisal wasaara kasta oo soo maray Somalia waa haddii uu hadalkan dhab yahay isla markaana yahay Cosoblihii aan aqiinnay
Xadiis laga weriyey Nebigeenii NNKH ahaatee ku yaal saxiixeynka ayaa odhanaya, qofka isu soo qadima in xil loo dhiibo, yaan loo dhiibin. Fadlan oo u fiirsada. Waxa ku jirta xikmad, yacnii ujeeddo ayuu u rabaa xilkaa, waa mindi 2ba af leh…
Waar xadiiska man dhalaba al imaara wuxuu ka hadlayaa marka khilaafa islaamiya jirto laakiin dhirqaan dhabashadan dhacday dee fiqigeedu waa intaasi oo cid salaax isu tirinaysa waa is qaddimayaan sida nabi Yusuf calayhi salaam sameeyay. Haddii kale adhax jabka waa uu sii socon hayaa. Fal tanabbah yaa sheekh
Ma waxaad leedahay TUF IYO DUCO waxaan aheyn shaqadaada maahan.
Saaka ayaan sheegay Fahad Yasiin labo shey ayaa maree
– Ethiopia (Axmed Cabdisalaam)
( COSOBLE iyo Wadaadkii Ceyr ee USA deganaa)
XASSAN DAAHIR UGUS IYO FAHAD YASIIN waa iney ku sameeyaan Clearance
Cosoble waa nin lacagna heysto laga soo bilaabey Dhaxal aabo BEERO (Not canshuur boobid XOOSH KIBREY CARAREY)
Waa nin shaqsiyan u wanaagsan
Waana nin Warsangeli ah haddii loo baahdo FORCE HABAR CEYNO
waxaan rabnaa Rasalwasaare ka sii awood badan Kheyre oo naga saaro xilliga kala GUURKA.
* Hiraab iyo Idil Farmaajo oo Caraadin badan kadib ku guuleystey inuu Farmaajo la kulmo Madaxda Galmudug iyo HIRSHABEELE kadib 4 sano.
War heedhe safku saakay dheeraa
Walaalaha hawiye iyo saaxiibaday aan isku fiicnayn sida garqaad.dabshid . wiil hiraab.hobyo godan iyo inta kalaba waxaan idinka dalbanayaa cafis hadaladii gafka ahaa ee aan ugu gafay beesha hawiye ilaah unbaan qaldamin ee binii aadamku waa qaldamaa sidoo kale mr xeraale marbaan isku dhacnay cafis iyo dhamaan inta kale ciid Mubarak walaalayaal
Saaxiib cafis iyo masaabax raali iyo nus baan kaa ahay walaaloow laftigaygu waan taraaraxee iska Kay cafi runtii waan ka xumahay gafkii aan u gaystay Beesha Mareexaan waana ka qoomameeyey arinkaa sababtoo ah Mareexaan waa qayb dhiigayga ka mid ah waa reer ayeeyaday Reer Diini oo reer Dalal ah aad baan uga xumahay wixii aan gaystay dhamaan cafi iyo masaabax.
xaalad halisa ayaa isi soo tareysa dhanka farmaajo lakin koley axmed cabdi salan marki uu magacabi lahaa cosoble ayaa uga roon
waxan maqli jirey naartu meel qabow malahan koley hiraab waa iska dab iyo holac iyo bir xadiida lakin farmaajo habargidir baan uga digaya weliba axmed cabdi salan
koley taariqdisa waa hayaan daarod farmaajo kama dhega yara dadka wuu ogaa wixii uu c/yuusuf ku sameyey
cosoble na nin sahlan maahan lakin reer muqdisho ayuu anfacaya cosoble hadii loo magacabo
adigu sxb nabadon baa tahay yaqaan kaftan ka iyo qanjiirada cafis sxb calool kuqad ma jiro
mida kale adigo GEDO LAND garoonka ayaaba kuu baahan waxa tahay kaftan.com
qoraladada mid aan comdy aheyn kuma jiro
Oo muxuu ahaa waxaas raaligelinta ah
Shaqsiyan waagooni lkn ma jirto raaligelin Hawiye, maxaa yeelay maahan Jufo.
Sxb meesha waa lagu kaftamaa ee ninkii kuugu xanaaqo maxaad wax uga sheegtay Hawiye kudheh AALA TAHEY.
Soo maadan arkin hadalada aan dhaho reer Bari, aniguna ma siiyo Raaligelin, ayaguna igama labadaan, MANA KU KALA TAGNO,
Oo Markuu TRAINKEENU isku leyn noqdana waxaan iska karbaashnaa Agoonta Kacaanka ama Iidoor iyo Dhyloos
Markaan Boring dareemnana anagaa isku FOOXINO.
– Nin Raali gelin dhiibey, asagaa u baahan Raali gelin in la siiyo.
Ninkii Xisbiga lahaa ee Mucaaridka ku ahaa dawlada oo qaadaya”aar Formaajo ii geeya”.
Duufaanka qabiilka ayaa kolba qaab loo dhigayaa.Hadba sida ay dantaadu ku jirto ayaad dadka u abaabulaysaa.
Mr Csoble,maanta qaabkan ayuu ku gaadhayaa dantiisa oo dhaqaale laga sameeyo dawladda oo ah meesha laga helo dhaqaalaha.
Waxaa la yidhaa danaha shaqsiga ah iyo qaabka loo adeegsado Bulshada qabiilka ku dhisan.
Hadba sida ay kuugu badiso ayaa arimaha u dhigaysaa.
Waan inaad gaadhaa dantaada adiga oo adeegsanaya qabiilka oo dabka saaraya.
Mr Cosoble,wuxuu ragii kicijiray qabiilka,ragii hubka u soo qaatay dawlada wakhtigii la casilayay Jawaari.
waa dadka qabiilka u adeegsada danaha uu isagu leeyahay.Haatan jagaasi oo waa inuu helaa,oo uu ku helaa qaab qabiil.
Kuma helayo qaab shaqo,qaab,karti ku dhisan,qaab,sharaf ku dhisan,qaab aqoon ku dhisan iyo qaab kale oo tayo ku dhisan.
Wuxuu ahaa Hogaamiye qabiil iyo alshabaab isku milan.Wuxuu ka mid yahay dadka ka maasha qaran la’aanta Wadanka.
Maaha wax Somaliyeed iyo wax Ummmadi ka dhexeeya in Reernimo kagu helo,taasi hadii laga koriwaayo,Dameero ayaa la ahaanayaa.
Daarood hadduu diido Axmed Cabdisalaam maxey sameyn oon ka aheyn iney Tuulooyinkoodii ku laabtan,
Waliba Naagtiisa Falastiin Axmed Iimaan
Wuxuu ka dhigan Wasiirka Amniga ayadaa ka masuul ah MUDULKA.
FORCE USC YOUTH
Xeraale iyo dabshid
Salaan aqyaarta maanta hadalkaan iga qora reysalwasaareha uu magacaabi doono farmaajo waa kii soo afjari lahaa nabad iyo nolol farmaajo dhinicii dayniile xitaa cidna kama jirto .waa heestii bidixduba maciin maleh haday midigtu maqan tahay
God hiraab aan galee intee uga baxaa kkkkk xaalku mafiicna
Aniga iga qor, Farmaajo hadduu noqon Madaxweyne Rasmi ah, awal MAAMADA ayaa UKUMA/xaniiyaha uga Taagneyd
Hadda caraadin ayey NAFTA uga qaadi.
Damjadiid hadduu usha u dhiibto Farmaajo isagaaban caadi ahayn…
Afgambigii lagu samayn lahaa miyuu gogosha u xaarayaa?…
Waar bahasha GEEDDI u dhiib haddaad W.G.Gaduud dhaafinayso mar kale…
Waa YAWMU CARAFA ee i Cafiya fadlan, idinna cafi iyo saamax… Eid Mubarak…
Gob gob dhashay walaalkey waa kaa gudoomay
Cosoble haddii uu isa soo sharaxo waa xaalad cuyuban ku noqon kadha Farmaajo.
Ninka Rw noqonaya haddii uu noqdo nin aan Yes man ahayn ee caqligiisa ku socda diidana maaweelada Farmaajo wado iyo qof iyo cod doorasho ah baan qabanayaa,kolkaa Farmaajo godkiisa ayaa biyo ugu soo galeen.
Ogow ninka RW noqonaya wuxuu noqon doonaa nin ka saamayn badan Famaajo kana awood badan haddii uu iska diido waxa Farmaajo wado. Waayo Farmaajo and company waxay dhanka beesha caalamka already ka xisaaban yihiin spoillers ama qaswadayaal.Dhaawacaas Farmaajo and company way qabaan. Ee waxaa dhiman ninkii shilalka lagu qali lahaa dul dhigi lahaa .
HAWIYE cafes weydiiso ama ha weydiisan.. MAREEXAAN have no place in the somali political future.
In the near future, MAREEXAAN AN will have no political role in somali future.
Waayo, Deegan aad ku gorgortaan ma aydaan liheen.
Dawlada goboleedyada dhisa majo baad ka tiheen. Madaxa aad soo tsabataan waa sacab biyo lagu shubbay.
Marka SOOMAALIWEYN waxaad u noqona doontaan kuwa Xoolaha u qala.
daanyer hadii uu la cararo xabad muusa geed inta la fuulo ku cunaa hada farmaajo waxan odhan lahaa adeer xabadan muus kaa geed kale la fuul oo keenso murusade ama gaaljecel kana fogow ninka hiraab waayo hiraab waa badweyn waana ku hafaneysa cid wax la qeybsan karta hiraab waxa jira niman kaa kablalax oo weliba isku duuban sida hada ey yihiin laangaab oo dhan waa libdhinayan marka raadso qola yaro caanbax raadineysa qaasatan hadii uu cosoble iyo axmed cabdi salan magabo car hadalkisa danbe sii maqla
xaange mida kale waa sida aad sheektay shaabad xun baa ku taal farmaajo company hada taabasho yar ama jug yar buu doonaya marka waa inuu ka cararo badweyn weliba axmed cabdi salan baa laga yaaba inuu deal la galo oo la saayiro lakin cosoble wuxu shaqo ka bilaabaya maamul goboleed layira banadirland
iyo maqaam muqdisho iyo sidii uu farmaajo miiska hoostisa u gelin lahaa
Sxb cidna raali gelin ha waydiisan..run
Haddii qof meesha ka doodaan ku xad gudubto, cafis waydiiso laakiin Hawiye caayey maaha wax la iska raali geliyo waayo Hawiye, Darood ama Isaaq maaha qof cid u hadli karto, weliba fadhi kudirir Kalshaale.
Aniga haddii reer Abtigay la caayo Sheeshaal ayaa ka caybadnaan lahaa, haddii reer Aabahay la caayo Majeerteen.
Maryooley ciid wanaagsan🇸🇴✌️
Inkastoo wixii hadal ahaa laygaga hor maray. Hadaan hadalka badiyo.
Eeboow xowyahay cafisku. Annagu ma faataxaan aqrinaa waad aragtay dhibkaan golaha iyo reerka ku hayno.
Ma adigaan. Arag. Jabhad oo dhahaayo. Annagoo qaatu ka taagneyn dabshid iyo garqaad. Ayaa hobyo iyo wiil xeraale noogu soo darsameen kkkkkkkkk.
Miyaadan arag. Kalsame oo inta dawaqo dhahaayo. Garqaad hobyo laalays wiil xeraale waa isku Hal qof.
Miyaadan arag. AXMED HANGASH. Oo golaha la taagan. Kheyre wax lagama sheego ee xaa farmaajo wax looga sheegaa. Calashaan maa reernimo lagu dhowro.
Sxb halkaan waa lagu kaftamaa waa lagu golaaftamaa. Dhinacaaga ka raac cidna raali gelin hasiinin. Hadii kale Dee kaftaankaad Naga xiri.
Hadaan jaalle daarood wax laga sheegin amaan hawiye hurdaaye wax laga sheegin. Ma raxanweyn ayaan baacsanaa igaar how bixin.
Ku hurguf waxaad aragto
Cafisku waa waajib ka gaarsii intaysan naftu kaa bixin wallee waa iga talo ilaahay wuxuu jeclaadaa adoonkiisa haduu baniiaadam qalad ka galay yiraahda I cafi hadana isaga cafis sii waydiista inkastoo aanan qalad weyn galin laakiin tan ugu daran waa inaad ogaataa inuu yahay carabka. Carabka asxaabihii qaarbaa kusigtay inay iska gooyaan carabkaaga koontarool barwaani king waa ifahantay yaan umalayn
Kkkkk waxaad leedahay xargaha gooso oo facaa iska dhici yaraantaydii ayaan soo xasuustay hooyaday baa i dhihi jirtay marka la isoo dilo doqon yahow maxaad la ooyaysaa nin rag ah iska dhig
Siyaasi waa danayste, Cosoble R/Wasaare aanu hore u noqon buu raadinayaa Culusow iyo Sherifna MADAXWEYNE ay hore u noqdeen bay raadinayaan, marka nin kastaa baadigoob buu gaar ugu jiraa. Cid qaldan iyo cid saxan toona ma jirto..
Sxb aniga iyo adiga politically waxaa nahay rag isku fikir ah, marka laga reebo maytida caydo sida Jaale Siyaad AUN.
Waxaan aaminsanay in dhibka nahaysta ka dambeeyeen askartii habeen madow qoriga nagu qabsaday anagoo democracy curdan ah oo leenahay potential in dal qani ah noqoto.
Waxay nabadeen waxaa ka daran waxay nabareen Kacaankii Daanyeerka ahaa.
Raggaas qoriga nugu qabsaday..Salaad Gabayre, Hawiye, Caynaanshe Isaaq, Cabduqaadir Dheel Majeerteen, Maxamed Siyaad Mareexaan, ayaa hogaaminayey..
Maxamed Siyaad inta ayagii sii inqilaabay oo laayey ayuu keligiis u haray hoggaanka.
Kacaankii haddaan ka hadlo Mareexaan kama wado..run
Golihii sare Kacaanka 21 nin oo dalka qabsaday Mareexaan 2 uga jiray…Maajeerteen 3..Hawiye 5, Isaaq 3 etc. Somali kuwada jirtay.
Laakiin waxaan u arkaa in daanyeer masiibo ahaa oo Somalia cirka looga soo riday…
Ilaa nagu gureen god madow oo ilaa maaanta kasoo bixi la’nahay.
Maanta waa in democracy aan luminay 1969 ku fara adaygno….no nin jeclaysi iyo waa igu qabiil.
Federal deal or no deal= Talo iyo dal lawada leeyahay oo cidna looga baqayn..
Vivo new Somalia🇸🇴
Golihii sare, 3 gadaal looga daray, Cali Mataan Xaahi ku jiray.
Watch cidda yihiin
Cali mataan xaashi Cali cagweyn wuu Ku jiray 25 kii pilot buu ahaa cirka waliba military Russia academy wuxuu xilufo la.ahaa gabayre dheel Caymanshe geeridiisii shaki bay dhalisay lamaba danbayn ragaas
Donald Trump ayaa yiri “anigauma baxaayi waqti hala iigu daro” waxaan ka baqayaa in Farmaajo uu kasoo baxo dhufeyska isagoo dhahaya “me too” ani xataa ha leygu daro.
Maxamadoow ha nala meereysane ee kasoo bax dhufeyska aan ku diidno ama ku yeelnee.
@ mr bahaloow.
Inkastoon ogahay. In aad aaminsan tahay.
Siyaad Barre iyo farmaajo in aan dowladu u dhexeyn.
Inkastoon ogahay in aad tahay qof isku maanweeliyo riyo been ah.
Aniga ka garqaad ahaan inkastoon kala aragti duwanahay. Hadana waxaa jiro wax yaabo badan oon kugu qadariyo. In aad tayo leedahay ayaa beri iga dhaadhacday.
Maanta waxaan isku dayaa in aan halkaa iska dhigo. Rag iska celiska.
Kasoo qaad adigoo villada maanta fadhiyo xaalkuna sidaan yahay.
Talaabo noocee ah ayaad qaadi laheyd?
Anigu talabadaan qaadi lahaa boga hoose ayaan ku qoray.
Abgaal afar majeerteen 5
Axmed maxamed cade.salaad gabayre.xuseen kulmiye.bashiir qoslaaye.majeerteen. abdirisaq abuukar.maxamuud geele yuusuf maxamed Cali shire . maxamuud Cali sharmaan col.mire awaare jaamac
Qof Soomaalidaa kale ah hadduu kacaankii wax ka sheego caadi baan u arkaa, lkn qof MJ iyo Iidoor ah hadduu wax ka sheego inuu annaka noo danleeyahay baan u arkaa… kkk
Sababta ma sharrixi karo, waan qaldanaan karaa… sxbow haddaad nabad naga rabto noo daa kacaankeenna aan agoontiisa nahay, yaan la kala gar darnaan..
Haddaan caqli gaabi jiri lahayn adduunkani caajis buu noqon lahaa.
Farmaajo Political suicide buu galay walabi xilli aad u xun oo wakhtigu aad u yaryahay.
U malayn maayo ninkasta oo uu keeno inuu ka dabaalan kara.Kaaga dare maaha nin isaga ay taladu ka go’do ee taladiisa waxaa gacanta ku haya Fahad yaasiin Qatar Ethiopia iyo Turki.
Waxaana la hadal hayaa in ay shir u qaban doonaan maalmaha soo socda. Bal waynu arki doonaa sida ay wax u furdaamiyaan
Waan isdaba marsiiyey qabiilada tiradooda..
Waxaan ka waday qabiil ma ahayn Kacaankii, ma garanayo Kacaankii waxa tuurta ugu qaateen Mareexaan. Yaab.
21 nin baa wadanka qabsaday, markii Maxamed Siyaad 3dii ugu sareeyey dilay ayuu 3 kale qortay…
Cali Mataan xitaa habeenkaas ma joogin Somalia, markaan dhageystay reerkayga oo aad u ula socday, madax sare ahaa oo goob joog ahaa..
Laakiin goonta Kacaanka waa in fahantiin in maanta Somalia qabiil walba idhahooda 5ta yihiin oo xitaa beel yar la siri karin..run
Hawiye ka taajirsan yahay Daarood oo dhan.
Aqoon iyo xoolo lagaa badan yahay…
Sow ma arag ragga Hawiye oo leh Darood marti noo yihiin Xamar ” The white pearl of Indian Ocean” Aka Xamar Cadde… Goorma ayey Xamar oo 1000 sano jirta noqotay goof Wacbuudhan……???
Daroodka qaawan laga adkaa……kkkkkkk
Majeerteen oo Puntland horbooda ayaa Hawiye af iyo adin isaga celin kara Somalia maanta..run😩
Mareexaanow good luck haddii Farmasjo Hiraabka ka dhameeyo in u heesaan.✌️
Aniga hoogaan Mareexaan ma diidani ee in civilwar lagu noqdo diidanahay…Majeerteen ciddi uma geli karto maanta, ninkii naf raba. Run
Koofur in hagaagto rabaa sida Bari iyo Waqooyi.
Aniga yaan Baraxley la iisoo dhaafin😎
kkkkkk Haddaad adinku naga dhex baxdaan nimankaa si fiican baan isu fahmi lahayn dalkana meel fiican baan gaarsiin lahayn…
War horta armaa Farmaajo la idiin qaataa?… Ka warran hadduu mid Xasan Sh. ka daran yimaado oo uu dhaho sidii Xasan xudduudku waa Garoowe?… Kud ka guur oo qanja u guur armay ka dhacdaa?…
Jeclaan lahaayaa haddii Mareexaan oo hogaanka noo hayey inta badan xoriyaddii ka dib meel khayr leh nagu furi lahaayeen…..daanyeerta Quule cunka badan..🤭
What we have as nation today or as Somali people. We have nothing= Jareer kala celisa u dira..!!
Alle ogyahay waxa caawa Xamar ka samaynayaan.
Waxaa nahay daanyeer duur wareeg ah oo aduunka dhan daadsan. run
21 sano iyo 4tii sano u dambaysay waa 25 sano oo daanyeer Mareexaan noo talinayeen..
Weligeed Somalia ma jiro qabiil intaas sano xikumay,…
Waxa aragooda ku deeqo ayaa oontooda kubdeeqdaa= Maahmaah Somali
Adan Cadde 2 sano, Cabdirashiid Cali Sharmarke 1,5 sano etc.
Mareexaan Siyaad Bare+ Farmaajo
25 years talada hayeen…run
Geeljirta mardambe maaha in la aanimo…
Beeralay iyo kalluumaysato iyo Kabo tole magaalo lee aamini karnaa.
Marka aan leeyahay Aadan Cabdule Cadde iyo Cabdirashiid 3,5 bar waa run…
Marka kasta doorasho ku celi, dowladaa codkii waa laga noqday Parlemanka, lagu jiray..
Laba mar gudoomiye parleman xukunka sii hayey inta dowladda la isku raacayo, muddo xukunka sii hayey Soobe iyo, markasta wax lee qaldanaa, waxaan ahayn first African democracy inkasta oo u bislayn oo la dhacdhacaynay democracy, waxaan ahsyn only African coutry oo free media iyo multi party system democracy lahaa Africa…waa run Adan Cabdulle iyo Cabdirisaq Xaaji Xiseen 2 sano kama badnayn si xor ah dalka u xukumeen oo mooshin ka oolin, Cabdirashiid iyo Ina Cigaal 1,5 bar. ilaa dileen Madaxweynihii.
Waxay Somali democracy golden era…run
Ninka taas ogeyn waa daanyeer🇸🇴
Amen 2 u land of punt,
Waxa aad sheegtay oo aan kugu raacsanahay ayaa waxeey tahay waqtiga la sheeg sheego ee ka horreeysay Afweeyne waxba maahan. Maadaama Somaliya xor ah waqtigii ugu badnaa, therefore, ugu saameeynta badnaa uu Somaliya wassay, kufsaday Afweeyne, waa isagga aabaha iyo hooyada wax kasta oo Somalida ka qaldamay. This asshole Afweeyne, waa ninka mother fucker ka ah ee fahmi waayay in uu qaato deal lamid ah kii eey qaateen carabta qurunka ah, Somaliyana ka dhigi laheeyd wadan saliid soo saara oo dadkiisa eeysanba is arkin!
Hadeer waxa aan ka abaayo oo igu soo dhacay ayaa waxeey tahay, sidda uu Afweeyne Somalidda u lug gooyay, in uu daanyeer Farmaajana u lug gooyo once again. Waxaana la wadaaga eedda daanyeer Shiiq Shariif iyo Ahmed Macalin Fiqi iyo daanyeero baddan oo dhahay kudhawaad 4 sanno kahor “ar Farmaajo ii geeya” nacalad ayaa ku taal kuwa caqliga noocaas ah leh!
Xasan Sheik iyo Farmaajo midba waxbuu aaminsanaa. run
1. Xasan sheik wuxuu aaminsanaa dhulka sheegtaan Majeereen kala tuur oo adaa dowlad ah ee dastuurka ku qor labada gobolada waa Mudug iyo Gslguduud xuduudka waa Buurtinle oo Garoowe saaran. kkkkkk
2. Farmaajo; Majeerteen shillin yey arkin ayagaa kuusoo kala dhuuman doono haddaay shilin waayaan, lacagtii Sheik Shariif iyo Xasan Sheik u saxiixeen waayaan..
Farmasjo waa u qaadan waayey nin lacag looga bashan 4 sano talada hayey…kkkkkkkk
Wuu ilaaway in Puntland naf iyo maal ku bixisay kursiga fadhiyo oo waagaas wax badan haysan..
Maanta oo daqli fiican heleen ka waran..?
Hadda Farmasjo ayaa Puntland madlaxo ugu jira..kkkkk
Kursiga Villa Somalia macaanaa🤣
Koofur dowlad fiican keena ama yaan Baraxley la iidoo dhaafin..run
Walaahi waa sheeko run, waxaa sheegay…Benjamin Natanyahu of israel wuxuu yiri: Somalia ummadda adduunka ugu ayaan daran.
Wuxuu ka waday Somalia oo dekedo, Gaas iyo Oil haysta oo adduunka uga dhow Khaliijka haddii lasoo saaro rabin oo dal degen noqoto oo xitaa, danteena maaha..
Ilaa maanta argagixisada taageera..run
Sanbalooshe dhagaysta been kuma hadlin…run
Waxaas oo dhan waxaa laga dhamaystay Kacaankii daanyeerka ahaa oo ku jirto in Ethiopia dagaal ku qaado oo laga waday in la jabiyo cududa Somalia, oo cidna aamin maal gashi…welina waa socotaa.